တျောလှနျရေးကွီး ပွီးသှားတဲ့အခါ ………………………………………………. – Shwe Likes
တျောလှနျရေးကွီး ပွီးသှားတဲ့အခါ ……………………………………………….
G Shwe | March 4, 2021 | Knowledge | No Comments
ဘစိုငျးဟာ တျောတျောလေး ပွနျရုနျးရမယျ။ သကျသကျခိုငျက ထိုငျနအေကောငျး ထမှကြိုးမှနျးသိဆိုသလို သူ့ဟာသူမဲရှုံးတာ ပွသနာမဟုတျသေးဘူး ခုတော့ သူ့စီးပှားရေး လုံးဝ ပွိုလဲသှားလိမျ့မယျ
ကြျောကြျောနန်ဒတယောကျ အရငျလို တလှဲတှလေုကျတဲ့အခါ ဆဲခငျြရငျတောငျ ငါတို့ မကျြနှာနာစရာတှေ ဖွဈကုနျပွီ။ ငွိမျးမွတျသူ Miss ထပျရှေးရငျ ဆဲတာလြှော့ပွီး လဈြလြူရှုရတော့မယျ မကျြနှာနာရမယျလေ
CDM သူရဲကောငျးတှေ ရုံးပွနျတကျတဲ့အခါ မကျြနှာကိုခြီပွီး ရငျကော့လြှောကျနိုငျပွီ
တမိသားစုလုံးနဲ့တိုကျခိုကျပွီး CDM လုပျခဲ့လို့ အမွဲမကျြနှာငယျရတဲ့ သူတှေ မိသားစုထဲမှာ roll တခုရလာမယျ။ အလုပျကိစ်စရှိလို့ ရုံးတှေ သှားရတဲ့အခါ CDM မလုပျခဲ့တဲ့ ဝနျထမျးတှကေို စစေ့ကွေ့ညျ့ပွီး ခပျထထေ့ပွေုံ့းပွရမဲ့အလုပျပါ ပိုလာတော့မယျ
တမွို့ကတမွို့ သှားလာတဲ့အခါ မီးရထားကိုပိုစီးမယျ တှဲထိနျးတှနေဲ့တှရေ့ငျ နှဈနှဈကာကာပွုံးပွကွမယျ။ ဒီတပါတျထဲမှ ဘကျပွောငျးကွတဲ့သူတှကေို မှတျထားပွီး ကဲ ငါတို့မပွောခဲ့ဘူးလားဆိုတဲ့အမူအရာနဲ့ မကျြခုံးကိုခြီပွီး ပွုံးပွရမယျ
ဘယျအနုပညာရှငျကိုအားပေးရမယျဆိုတာ သဲသဲကှဲကှဲ သိသှားမယျ ဆနျးကြျောစှာဝငျးရဲ့ ကဗြာတှေ ပိုဖတျဖွဈမယျစဈငွိမျးက အခဈြအကွောငျးအနုအရှတှေ ပိုရေးတော့မလားပဲ သူ့လဲ အားပေးရမယျ သနေတျတှကွေား ကညျြဆနျတှကွေား ပွေးခဲ့ရခြိနျတှအေကွောငျး ရယျမောရငျး ပွနျပွောကွတာပေါ့
Game ပဲဆော့နတေဲ့ ဂဈြကနျကနျ Gen Z လေးတှကေိုလဲ လူကွီးတှကေ respect တခု တနျးတခုနဲ့ အရေးတယူ ဆကျဆံလာကွမယျ Fb ပျေါ လသေံတောငျမဟရဲခဲ့သူတှရေဲ့ ကမြလှလားတှေ ဘယျသှားစဉျတဖွတျ ပို့ဈတှကေို haha ပေးကွမယျ လိပျပွာမလုံသူတှေ အသံတိတျပွီး
လိပျပွာလုံခဲ့တဲ့ တျောလှနျရေးသမားတိုငျးက ရယျမောပြျောရှငျနကွေလိမျ့မယျ ဒီ တျောလှနျရေးကွီး ပွီးသှားတဲ့အခါကရြငျလေ
လှိုငျသာယာသှားဖို့လညျး ကတြျောမကွောကျတော့ဘူး ရှပွေညျသာကိုလညျး ကတြျောရငျးနှီးသှားပွီ✔️ မွောကျဒဂုံအတှငျးဘကျက လူမသနျ့ဘူးဆိုတဲ့စကားတှကေို ကတြျောလုံးဝမယုံတော့ဘူး✔️ သာကတေက လူမိုကျတှပေေါတယျဆိုရငျ ပွုံးပွပွီး ရောကျအောငျလာခဲ့မယျစိတျခြ✔️
ကတြျောတို့ကို စိတျဝမျးကှဲအောငျလုပျခဲ့တာ ခါးပိုကျနှိုကျလုယကျလူသတျမှုတှမေဟုတျဘူး အဲ့လုပျရပျတှကေိုအစဉျတစိုကျလုပျခဲ့ကွတဲ့ စဈတပျဘကျကအောကျတနျးစားလူတဈစုဆိုတာကို ဒီပှဲမှာကောငျးကောငျးကွီးသဘောပေါကျသှားပွီ✔️ ကြူးကြျောတှဟော မရိုငျးပါ အဲ့မှာနတေဲ့ သူတို့သူလြှိူတှကေယုတျမာကွတာကို ရှငျးရှငျးလငျးလငျးသိခဲ့ရပွီ✔️
မူစလငျတှကေိုလညျး ကတြျောခဈြနိုငျခဲ့ပွီ✔️ ခရဈယနျတှပွေောပွတဲ့ရရေူအကွောငျးတှကေို အခြိနျပေးနားထောငျဖို့ဝနျမလေးတော့ဘူး✔️ ကတြျောတို့စိတျဝမျးကှဲအောငျနှဈအကွာကွီး ပူးသတျနတေဲ့လူတဈစုကို ကတြျောတို့အားလုံးပေါငျးပွီး တျောလှနျနကွေပွီ ကတြျောတို့နိုငျနပွေီ ✊
မကွာခငျမွနျမာပွညျကွီးထဲမှာ လောကျကောငျတှအေားလုံးမြိုးတုနျးပြောကျကှယျသှားကွတော့မညျ✊ ဒီပှဲပွီးရငျ ကတြျောတို့အားလုံးလကျတှတှေဲပွီး မွနျမာပွညျကွီးကိုဆေးပွနျကုပေးကွမယျ✊ ဦးမော့လာနိုငျအောငျ လကျတှတှေဲပွီးဆှဲတငျကွမယျ မကွာပါဘူး ကတြျောတို့ရဲ့မွနျမာဟာ နိုငျငံတကာအလယျမှာ ရငျကော့ခေါငျးမော့ပွီး လကျမထောငျနိုငျတော့မယျ 💪
နိုငျငံခွားရောကျမွနျမာတှေ မကျြနှာပှငျ့တော့မယျ ❤️ မွနျမာပွညျမှာနတေယျဆိုတာကို ဂုဏျယူဝံ့ကွှားစှာ ပွောပွနိုငျတော့မယျ❤️
မကွာတော့ဘူး မွငျနရေပွီ✊ မကွာတော့ဘူး မွငျနရေပွီ✊
ဘစိုင်းဟာ တော်တော်လေး ပြန်ရုန်းရမယ်။ သက်သက်ခိုင်က ထိုင်နေအကောင်း ထမှကျိုးမှန်းသိဆိုသလို သူ့ဟာသူမဲရှုံးတာ ပြသနာမဟုတ်သေးဘူး ခုတော့ သူ့စီးပွားရေး လုံးဝ ပြိုလဲသွားလိမ့်မယ်
ကျော်ကျော်နန္ဒတယောက် အရင်လို တလွဲတွေလုက်တဲ့အခါ ဆဲချင်ရင်တောင် ငါတို့ မျက်နှာနာစရာတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီ။ ငြိမ်းမြတ်သူ Miss ထပ်ရွေးရင် ဆဲတာလျှော့ပြီး လျစ်လျူရှုရတော့မယ် မျက်နှာနာရမယ်လေ
CDM သူရဲကောင်းတွေ ရုံးပြန်တက်တဲ့အခါ မျက်နှာကိုချီပြီး ရင်ကော့လျှောက်နိုင်ပြီ
တမိသားစုလုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ပြီး CDM လုပ်ခဲ့လို့ အမြဲမျက်နှာငယ်ရတဲ့ သူတွေ မိသားစုထဲမှာ roll တခုရလာမယ်။ အလုပ်ကိစ္စရှိလို့ ရုံးတွေ သွားရတဲ့အခါ CDM မလုပ်ခဲ့တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို စေ့စေ့ကြည့်ပြီး ခပ်ထေ့ထေ့ပြုံးပြရမဲ့အလုပ်ပါ ပိုလာတော့မယ်
တမြို့ကတမြို့ သွားလာတဲ့အခါ မီးရထားကိုပိုစီးမယ် တွဲထိန်းတွေနဲ့တွေ့ရင် နှစ်နှစ်ကာကာပြုံးပြကြမယ်။ ဒီတပါတ်ထဲမှ ဘက်ပြောင်းကြတဲ့သူတွေကို မှတ်ထားပြီး ကဲ ငါတို့မပြောခဲ့ဘူးလားဆိုတဲ့အမူအရာနဲ့ မျက်ခုံးကိုချီပြီး ပြုံးပြရမယ်
ဘယ်အနုပညာရှင်ကိုအားပေးရမယ်ဆိုတာ သဲသဲကွဲကွဲ သိသွားမယ် ဆန်းကျော်စွာဝင်းရဲ့ ကဗျာတွေ ပိုဖတ်ဖြစ်မယ်စစ်ငြိမ်းက အချစ်အကြောင်းအနုအရွတွေ ပိုရေးတော့မလားပဲ သူ့လဲ အားပေးရမယ် သေနတ်တွေကြား ကျည်ဆန်တွေကြား ပြေးခဲ့ရချိန်တွေအကြောင်း ရယ်မောရင်း ပြန်ပြောကြတာပေါ့
Game ပဲဆော့နေတဲ့ ဂျစ်ကန်ကန် Gen Z လေးတွေကိုလဲ လူကြီးတွေက respect တခု တန်းတခုနဲ့ အရေးတယူ ဆက်ဆံလာကြမယ် Fb ပေါ် လေသံတောင်မဟရဲခဲ့သူတွေရဲ့ ကျမလှလားတွေ ဘယ်သွားစဉ်တဖြတ် ပို့စ်တွေကို haha ပေးကြမယ် လိပ်ပြာမလုံသူတွေ အသံတိတ်ပြီး
လိပ်ပြာလုံခဲ့တဲ့ တော်လှန်ရေးသမားတိုင်းက ရယ်မောပျော်ရွှင်နေကြလိမ့်မယ် ဒီ တော်လှန်ရေးကြီး ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်လေ
လှိုင်သာယာသွားဖို့လည်း ကျတော်မကြောက်တော့ဘူး ရွှေပြည်သာကိုလည်း ကျတော်ရင်းနှီးသွားပြီ✔️ မြောက်ဒဂုံအတွင်းဘက်က လူမသန့်ဘူးဆိုတဲ့စကားတွေကို ကျတော်လုံးဝမယုံတော့ဘူး✔️ သာကေတက လူမိုက်တွေပေါတယ်ဆိုရင် ပြုံးပြပြီး ရောက်အောင်လာခဲ့မယ်စိတ်ချ✔️
ကျတော်တို့ကို စိတ်ဝမ်းကွဲအောင်လုပ်ခဲ့တာ ခါးပိုက်နှိုက်လုယက်လူသတ်မှုတွေမဟုတ်ဘူး အဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုအစဉ်တစိုက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့ စစ်တပ်ဘက်ကအောက်တန်းစားလူတစ်စုဆိုတာကို ဒီပွဲမှာကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်သွားပြီ✔️ ကျူးကျော်တွေဟာ မရိုင်းပါ အဲ့မှာနေတဲ့ သူတို့သူလျှိူတွေကယုတ်မာကြတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိခဲ့ရပြီ✔️
မူစလင်တွေကိုလည်း ကျတော်ချစ်နိုင်ခဲ့ပြီ✔️ ခရစ်ယန်တွေပြောပြတဲ့ရေရူအကြောင်းတွေကို အချိန်ပေးနားထောင်ဖို့ဝန်မလေးတော့ဘူး✔️ ကျတော်တို့စိတ်ဝမ်းကွဲအောင်နှစ်အကြာကြီး ပူးသတ်နေတဲ့လူတစ်စုကို ကျတော်တို့အားလုံးပေါင်းပြီး တော်လှန်နေကြပြီ ကျတော်တို့နိုင်နေပြီ ✊
မကြာခင်မြန်မာပြည်ကြီးထဲမှာ လောက်ကောင်တွေအားလုံးမျိုးတုန်းပျောက်ကွယ်သွားကြတော့မည်✊ ဒီပွဲပြီးရင် ကျတော်တို့အားလုံးလက်တွေတွဲပြီး မြန်မာပြည်ကြီးကိုဆေးပြန်ကုပေးကြမယ်✊ ဦးမော့လာနိုင်အောင် လက်တွေတွဲပြီးဆွဲတင်ကြမယ် မကြာပါဘူး ကျတော်တို့ရဲ့မြန်မာဟာ နိုင်ငံတကာအလယ်မှာ ရင်ကော့ခေါင်းမော့ပြီး လက်မထောင်နိုင်တော့မယ် 💪
နိုင်ငံခြားရောက်မြန်မာတွေ မျက်နှာပွင့်တော့မယ် ❤️ မြန်မာပြည်မှာနေတယ်ဆိုတာကို ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားစွာ ပြောပြနိုင်တော့မယ်❤️
မကြာတော့ဘူး မြင်နေရပြီ✊ မကြာတော့ဘူး မြင်နေရပြီ✊ မကြာတော့ဘူး မြင်နေရပြီ✊